Wali waqti aad ku codeyso ayaad heysataa ee codee - NorSom News
Waxaa saacad iyo bar kadib lasoo xiri doonaa goobaha codbixinta oo caawa saacada 21:00 lasoo xiri doono. Dadka aan codeyn, ama maanta galinkii hore shaqo ku maqnaa, waxey wali heystaan saacad iyo bar ay codkooda ku dhiiban kartaa.
Waxaa muuqato in xisbiyadu ay aad isugu dhowyihiin, cod walba oo la dhiibtana uu abuuri kara in natiijada doorashada ay dhinac u dhacdo. Sidaas darteed waxaan soomaalida aan wali codeyn ku boorineynaa inay saacadaas dhiman ka faa´iideystaan.
Caawa saacada 21:00, waxaa soo bixi doonto natiijada hordhaca ah ee doorashada.
Previous articleBeled-Hawo: Al-Shabaab angrep somalisk grenseby
Next articleKoormeerayaal ka socdo 32 wadan oo maanta hubiniyay qaabka doorashada ay u dhaceyso.